काठमाडौंमा २० वर्षीय युवतीमाथि एसिड प्रहार!!! « Np Online TV
काठमाडौंमा २० वर्षीय युवतीमाथि एसिड प्रहार!!!
काठमाडौंको कालोपुलमा बुधबार साँझ २० वर्षीय युवतीमाथि एसिड प्रहार भएको छ । ती युवतीमाथि अपरिचित व्यक्तिले एसिड प्रहार गरेर फरार भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार युवतीको शरीरका विभिन्न भाग एसिडले जलेको छ भने उनको चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ । प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार एसिड हान्ने व्यक्तिको पहिचान हुन सकेको छैन ।